Iindaba - Ukubuyiswa kweemarike zentsimbi yaseTshayina kuyaqhubeka
Ukubuyiswa kweemarike zentsimbi yaseTshayina kuyaqhubeka, phakathi kwemizabalazo yehlabathi
Ubhubhane we-coronavirus wenza umonakalo omkhulu kwiimarike zentsimbi kunye noqoqosho kwihlabathi liphela, ngeenyanga ezintandathu zokuqala zika-2020. Uqoqosho lwase China lwaba lolokuqala ukubandezeleka ngenxa yokutshixwa okunxulumene neCovid-19. Imveliso yeli lizwe yehle kakhulu, kweyoMdumba kulo nyaka. Nangona kunjalo, ukubuyela ngokukhawuleza kubhaliwe ukususela ngo-Epreli.
Ukuvalwa kweeyunithi zokuvelisa, e-China, kukhokelele kwimicimbi yokuhanjiswa kweenkonzo ezivakalayo kuwo onke amazwekazi, kumacandelo amaninzi atya intsimbi. Ayikho enye into eyenziwayo njengakwishishini leemoto, ebesele lisokola ukujongana neeprotokholi zovavanyo ezintsha kunye nokushenxela kwizithuthi eziluhlaza, ezonga amandla ngakumbi.
Iziphumo kubenzi beemoto zehlabathi zihlala zingaphantsi komgangatho wobhubhane, ngaphandle kokunciphisa izithintelo ezibekwe ngurhulumente kumazwe amaninzi. Ibango kweli candelo libalulekile kubavelisi abaninzi bentsimbi.
Imvuselelo kwimarike yentsimbi, e-China, iyaqhubeka ukuqokelela isantya, ngaphandle kokuqala kwexesha lemvula. Isantya sokubuyisela kwimeko yesiqhelo sinokunika iinkampani zaseTshayina isiqalo xa abathengi behlabathi bebuyela kwimarike, emva kweenyanga zokuhlala ekhaya. Nangona kunjalo, ukukhula kwemfuno yasekhaya, e-China, kunokwenzeka ukuba kuthathe uninzi lweziphumo ezandisiweyo.
Isinyithi siphula i-US $ 100 / t
Ukunyuka kwemveliso yentsimbi yaseTshayina, kutsha nje, kube negalelo kwiindleko zentsimbi ezihamba ngaphezulu kwe-US $ 100 ngetoni nganye. Oku kubeka uxinzelelo olubi kwimida yenzuzo ngaphandle kwe China, apho imfuno ihlala ithulisiwe kwaye amaxabiso entsimbi ebuthathaka. Nangona kunjalo, ukunyuka kwenkcitho yegalelo kunokunika abavelisi amandla okunyusa ukunyuka kwamaxabiso entsimbi, kwiinyanga ezizayo.
Ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwimakethi yaseTshayina kungatyhila indlela yokuphuma kwimeko yokudodobala kwecoronavirus kwicandelo lesinyithi lehlabathi. Umhlaba wonke ungasemva kwegophe. Nangona ukuvuseleleka kwamanye amazwe kubonakala ngathi kuhamba kancinci, kukho imiqondiso elungileyo enokuthathwa kukungabikho eTshayina.
Amaxabiso esinyithi kulindeleke ukuba aqhubeke eguquguqukayo, kwisiqingatha sesibini sonyaka we-2020, njengoko indlela yokubuyela kwimeko yesiqhelo kulindeleke ukuba ingalingani. Imeko kwintengiso yehlabathi inokuba mandundu ngaphambi kokuba ibe ngcono. Kuthathe iminyaka emininzi ukuba icandelo lesinyithi libuyise uninzi lomhlaba olahlekileyo, kulandela ingxaki yemali ka-2008/9.